नेपाली बलिङको भविष्य देखिएका पाँच खेलाडी | Hamro Khelkud
नेपाली बलिङको भविष्य देखिएका पाँच खेलाडी
बलिङ नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रमुख हतियार हो । नेपालको ईतिहासदेखि हालसम्म उपलब्धीमा बलिङ प्रमुख पक्ष रहँदै आएको छ । कमजोर बलिङको कारण नेपालले थोरै अवसर गुमाएको छ । नेपालको विश्व क्रिकेटमा बनेका कीर्तिमानमा बलिङबाट धेरै छन् ।
वर्तमान समयमा पनि नेपालको बलिङ प्रमुख हतियार रहँदै आएको छ । उमेर समूह र घरेलु प्रतियोगितामा बलरहरुको प्रभाव उत्कृष्ट छ । टोलीमा स्थान बनाउन ब्याट्सम्यानको तुलनामा बलरहरुमा बढि प्रतिस्पर्धा, धैर्यता र संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा खेलाडीले बलिङमा राम्रो सम्भावना देखाएका छन् । उनीहरुलाई समय अनुसार तयार पार्न सक्ने हो भने आगमी दिनमा नेपालको बलिङ अझ मजबुत बन्ने देखिन्छ ।
युवा खेलाडीलाई टोलीमा डेब्यु गराउन हतार र धैर्यता देखाउन नसक्ने नेपाली क्रिकेटको समस्या सुधार गर्नैपर्ने देखिन्छ । अन्यथा थुप्रै युवा खेलाडीको प्रतिभा त्यतिकै खेर जान सक्छन् । बलिङको भविष्य मानिएका पाँच युवा खेलाडी, जसले आगमी दिनमा नेपाली क्रिकेटलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखाएका छन् ।
५. सागर ढकाल (स्पिनर)
स्पिनर सागर ढकाल नेपाली क्रिकेटमा राम्रो सम्भावना बोकेका युवा खेलाडी हुन् । गत माघमा अमेरिकाविरुद्ध अभ्यास खेलमा नेपाल ‘ए’ लाई ३७ रनको उत्कृष्ट जित दिलाउन सागरले मुलपानी क्रिकेट मैदानमा ८ ओभरमा ३ मेडन सहित १३ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । उक्त खेलमा १ सय १२ रनको पछ्याएको अमेरिका ३३.२ ओभरमा ७४ रनमा अल आउट भएको थियो ।
गतवर्ष जुलाईमा मलेसियामा एसिसी इस्र्टन रिजन यू१९ प्रतियोगितामा नेपाल च्याम्पियन बन्दा सागर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । सागरले उक्त प्रतियोगितामा ४ खेलमा १५ विकेट लिएका थिए । उमेर समूह र घरेलु क्रिकेटमा सागरले राम्रो छाप छोड्दैं आएका छन् । नेपाल पुलिस क्लबबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने सागरले गतवर्ष प्रधानमन्त्री एकदिवसिय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ८ विकेट लिएका थिए ।
गतवर्ष धनगढी प्रिमियर लिगमा महेन्द्रनगर युनाइटेडलाई फाइनलमा पुर्याउन ६ खेलमा ११ विकेट लिदै महत्वपूर्ण प्रर्दशन गरेका थिए । हाल सिनियर टोलीमा सन्दीप लामिछाने, सुशन भारी, ललित नारायण राजवंशी लगायतका स्पिनर हुँदा उनलाई स्थान बनाउन सहज देखिदैन । तर सागर एक राम्रो विकल्प हुन् । सिनियर टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परि सकेका सागरले आफूलाई अन्तिम १४ मा अटाउँन संघर्षरत छन् ।
४. प्रतिस जि.सी.
तीव्र गतिका बलर प्रतिस जि.सी. पनि नेपाली क्रिकेट टोलीमा एक ठूलो सम्भावना बोकेका युवा खेलाडी हुन् । तल्लोक्रममा ठूला सट खेल्न सक्ने क्षमता राख्ने प्रतिसले तीव्र गतिमा बलिङ गर्ने गर्दछन् । यू१६ हुँदै हाल यू१९ का प्रमुख सदस्य प्रतिसले टोलीमा औसत प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
डेढ वर्षदेखि यू१९ टोली बाट खेल्दै आएका प्रतिस सिनियर खेलाडीको कारण केहि ओझेलमा पर्न पुगे । अर्थात टोलीमा परेपनि नियमित प्लेइङ ११ मा परेनन् । तर उनले आफूले पाएको मौकामा भने ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा योगदान दिएका छन् । हाल यू१९ का प्रमुख सदस्य प्रतिसले बागमती प्रदेशबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने गर्दछन् । फ्रेन्चाईज लिगमा भने डेब्युको पर्खांइमा छन् ।
प्रतिसको उमेर अनुसार प्रर्दशनमा पनि निखारता आउँने छ । उनलाई त्यसको लागि राम्रो समय छ । प्रतिस औपचारीक रुपमा सिनियर टोलीको बन्द प्रशिक्षण परेका छैनन् । तर सिनियर टोलीलाई नेटमा बलिङ भने गर्दै आएका छन् । उनको प्रतिभा र खेल्ने शैलीलाई हेर्दा नेपाली क्रिकेटमा ठूलो सम्भावना बोकेका युवा खेलाडी देखिन्छन् ।
तीव्र गतिका बलर किशोर महतो पनि नेपाली क्रिकेटमा एक ठूलो सम्भावना बोकेका युवा खेलाडी हुन् । सोमपाल कामीको अनुपस्थीतिमा गत फागुनमा थाईल्यान्डमा भएको एसिसी इस्र्टन रिजन टि२० प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टोलीमा परेपनि डेब्यु भने गर्न पाएनन् । किशोरले घरेलु क्रिकेटमा राम्रो प्रभाव छाडि सकेका छन् ।
गत पिपिएलमा विराटनगर टाइटन्सलाई फाइनलमा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिने क्रममा किशोरले ७ खेलमा १० विकेट लिएका थिए । आत्माविश्वासी किशोर दबाबमा पनि उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने गर्दछन् । पहिलो संस्करणको पिपिएलमा बुटवल ब्लास्टर्सलाई अन्तिम खेलमा १३ रन चाँहिएको अवस्थामा मेडन राख्दै किशोरले राम्रो चर्चा कमाएका थिए ।
गतवर्ष पिएम कपमा किशोरले गण्डकी प्रदेशबाट ४ खेलमा ८ विकेट लिएका थिए । किशोर तल्लोक्रममा ठूला सट पनि खेल्ने गर्दछन् । ब्याटिङमा पनि योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्ने किशोरलाई आगमी दिनमा नेपालको बलिङ भविष्य मानिएको छ ।
२. कमलसिंह ऐरी
तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरीले सिनियर टोलीमा डेब्यु गरि सकेका छन् । उमेर समूह र घरेलु क्रिकेट प्रतियोगितामा उच्च प्रर्दशन गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीमा ठूलो सम्भावना देखाईं सकेका छन् । कमलले गत माघमा आइसिसी विश्वकप लिग–२ मा ओमानविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
नियमित तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी अस्वस्थको कारण कमलले सिनियर टोलीमा मौका पाएका थिए । डेब्यु खेलमा भने अपेक्षा अनुसार प्रर्दशन गर्न सकेनन् । तीन वर्षसम्म यू१९ टोलीको प्रमुख बलर रहेका कमलले फ्रेन्चाइज लिग इपिएल चितवन टाइगर्स, डिपिएल सिवाईसी अत्तरिया र पिपिएल धनगढी एक्स्पर्टबाट राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
अन्य घरेलु क्रिकेट भने एपिएफबाट खेल्ने गर्दछन् । आगमी दिनमा आफ्नो कम्जोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढेको खण्डमा कमलको प्रर्दशन पनि उत्कृष्ट हुँदै जाने छ ।
१. राशिद खान
तीव्र गतिका बलर राशिद खान नेपाली क्रिकेटमा ठूलो सम्भावना बोकेका एक युवा खेलाडी हुन् । गत मंसिरमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा राशिदले भुटानविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए । यू१९ टोलीका प्रमुख सदस्य राशिदले घरेलु क्रिकेट, उमेर समूह र फ्रेन्चाइज लिगमा राम्रो प्रभाव छाडि सकेका छन् ।
पहिलो संस्करणको पिपिएलमा पोखरा पल्टनलाई च्याम्पियन बनाउन उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै राशिद उदयमान खेलाडी घोषित भएका थिए । राशिद तल्लोक्रमा ठूला सट खेल्दै ब्याटिङ इनिङ उकास्ने क्षमता समेत राख्दछन् । पछिल्लो समय नेपाल पुलिसबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने राशिदले राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
गतवर्ष मेरिलेबोन क्रिकेट (एमसीसी) विरुद्ध टि२० खेलमा ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । घरेलु क्रिकेटमा उच्च प्रर्दशन गरि रहेका राशिदले भुटानसँगको डेब्यु खेलमा भने अपेक्षा अनुसार प्रर्दशन गर्न सकेनन् । राशिदले आफूले आफूलाई तयार पार्ने राम्रो समय छ । उनको हालसम्मको प्रर्दशन र क्षमतालाई हेर्दा नेपाली क्रिकेटमा लामो यात्रा गर्न सक्ने क्षमता भएको युवा बलरको रुपमा हेरिएको छ ।